Expert Islamabad Semalt Semalt: Ihe Nile I Kwesiri Ịmara Banyere Ngini Ngini
Algọridim dị mgbagwoju anya nke search engine s dị ka enweghị ike ịnweta ya, mana engines na-enye obere ozi gbasara iji nweta nsonaazụ ọchụchọ ma ọ bụ okporo ụzọ okporo ụzọ na-emekarị. Ọtụtụ mgbe, engines ọchụchọ na-enye anyị ozi banyere SEO na otu esi ebuli saịtị gị. Nchọgharị nyocha bụ otu usoro ngwanrọ nke na-enyere aka ịchọ weebụsaịtị ebe dabere na isiokwu ndị ị na-ahọrọ na ya.
Michael Brown, onye ọkachamara kachasị na Semalt , na-elekwasị anya na eziokwu ahụ bụ na engines na-agafe na nchekwa data ha ma chọpụta ihe kachasị mma maka gị. Ọzọkwa, ha na-arụ ọrụ dịgasị iche iche, dị ka ebe nrụọrụ weebụ na-awagharị, na-edepụta ndeksi, na inye ndị ọrụ ndepụta nke ebe nrụọrụ weebụ na-ewu ewu dị ka nyocha ha na isiokwu ha - castalia chronoderm eye makeup. Nkwụsị nke ọ bụla bụ akwụkwọ pụrụ iche (pdf, ibe weebụ, jpg, ma ọ bụ ndị ọzọ), na engines na-achọ ọrụ na-arahụ ebe nrụọrụ weebụ niile site na iji akwụkwọ a. Ha na-etinye nkwụsị zuru ezu ma chọpụta ogo backlinks nke weebụsaịtị dị iche iche.
Ọrụ abụọ bụ isi nke engines ọchụchọ bụ:
1. Ntugharị na ntanetị nke weebụsaịtị: ngwa engines na-achọpụta ọtụtụ nde akwụkwọ weebụ, peeji nke, ozi akụkọ, vidiyo, faịlụ, na mgbasa ozi.
2. Inye azịza ziri ezi: engines ọchụchọ na-enyekwa azịza nke ajụjụ ndị ọrụ n'ụdị ndepụta na peeji ndị dị mkpa ha weghachite na ọkwa maka mkpa.
Google na ngwa engines ndị ọzọ na-akwado ndị na-esonụ maka ọkwa kachasị mma:
1. Mee akwukwo akwukwo maka ndi nleta gi, obughi maka ulo oru nchoputa. I kwesịghị ịghọgbu ndị ọrụ ma zere ịmepụta ọdịnaya ụgha maka njikwa ogo search engine .
2. Zụlite ebe nrụọrụ weebụ gị na ndị ọkachamara doro anya na njikọ ederede. Ibe akwukwo nile kwesiri ibu ihe a ga-achota ma nwee ike iru maka otu ederede ihe odide..
3. Ị kwesịrị ịmepụta, weebụsaịtị bara uru na nke bara uru, na ide ederede nke kọwara ngwaahịa gị yana ọrụ gị.
4. I kwesiri iji okwu okwu na ahịrịokwu kwesịrị ekwesị iji zụlite URL ndị mmadụ na-eme enyi na ndị na-akọwa ihe. Ọ dị mkpa iji nye otu nsụgharị otu URL ka ndị ọrụ wee ghara ịdee na 301 peeji nke dakwasịrị ọdịnaya.
Ndi nyocha na ntuziaka nyochaa yiri?
Akwụkwọ ndekọ weebụ na ụlọ ọrụ ọchụchọ abụghị otu, ma okwu abụọ ahụ na-enweta nkwado na oge. Mgbe ụfọdụ, ndị mmadụ na-enwe mgbagwoju anya gbasara otu esi akọwa ọdịiche dị na ihe nchọgharị weebụ na engines ọchụchọ. Ka m kwuo ebe a na engines na-akpaghị aka na-ekepụta onwe ha na ebe nrụọrụ weebụ yana enyemaka nke bọọlụ na spiders. Ha na-edekọ ozi ahụ ma soro njikọ nke saịtị iji ruo ibe weebụ ndị ọzọ. Ndị na-enyocha nyocha ọchụchọ chọtara ibe weebụ site na backlinks, ya mere, ndị ọrụ ga-edozi ọdịnaya ha na ndekọ ederede ka ndị spiders na bots nwere ike ịmata ha. Ọ dị mma iji aka gị nyefee ebe nrụọrụ weebụ gị na ntuziaka dịka Yahoo ma nyere aka na engines ịchọpụta ebe nrụọrụ weebụ gị.
Kedu ka ụlọ ọrụ ọchụchọ na - esi achọpụta njirimara na mkpa?
Iji Google, Bing, Yahoo na engines ọchụchọ ndị ọzọ, ọ dị mkpa ịchọta mkpụrụokwu ziri ezi na ahịrịokwu. E nwere oge mgbe engines na-achọpụta nyere anyị obere data. Ma ugbu a, ndị injinia nwere ọgụgụ isi ma nwee ahụmahụ echepụtawo ụzọ ha ga-esi jikọọ rịzọlt nke ajụjụ ndị ọrụ ahụ n'ụzọ dị irè. Ọtụtụ narị puku ihe ugbu a na-emetụta mkpa ahụ, na engines na-achọpụta na ebe nrụọrụ weebụ kachasị ama nwere data kachasị mkpa na nke ziri ezi. Echiche a enwewo ihe ịga nke ọma banyere afọ ojuju nke ndị ọrụ na Google, Bing, na Yahoo. The engines ọchụchọ na-eji ụfọdụ algọridim ịkwado dị iche iche na ebe nrụọrụ weebụ, na algọridim ndị a gụnyere ọtụtụ narị puku ọtụtụ variables. N'ahịa ahịa, ndị ọkachamara na-ezo aka na algọridim dị ka ihe dị elu.
E nwere ọtụtụ ihe ịchọ mma search engines ịhọrọ site, ma ndị kacha mma na-akpọ n'okpuru
100 Search engines na 100 Days - Ndị a bụ niile-nzube search engines, ndị mmadụ search engines, na engines ọchụchọ. Ị nwere ike ịchọta ha niile na ịntanetị.
Otu esi acho Nchọgharị Nchọpụta: Ọ dị mkpa iji bulie search engine kasị mma na Nchọgharị Nchọpụta 101, nke bụ ụzọ kachasị mma iji chọpụta ihe ndị ọzọ metụtara isiokwu, gbalịa ịchọta engines ọhụrụ wee chọpụta ihe kacha mma site na weebụsaịtị weebụ.
Na mgbakwunye na ndụmọdụ na ndụmọdụ ndị a, ndị ahịa na-achọ ahịa achọpụtala ụzọ isi ewepụ ozi ahụ dabere na ibe ha. Ugbu a, ndị ahịa na SEO na-eji koodu kapịrị ọnụ na data iji nyere ha aka na ebe nrụọrụ weebụ ha na ebe nrụọrụ weebụ ha ga-eme nke ọma na njikwa search engine . N'ụzọ dị ịtụnanya, engines ọchụchọ na-akwado mgbalị dị iche iche ma nye ndị ọrụ ha ndụmọdụ bara uru. Ọbụna ndị nchọnchọ nchọnchọ na-enyere ndị webmasters na ndị na-ede blọgụ aka site na itinye aka na blog posts, forums, na mkparịta ụka.